Falanqeynta Kulanka: Leicester City Vs Manchester United Ee Koobka FA Cup-ka
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka: Leicester City Vs Manchester United ee Koobka FA Cup-ka
March 21, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Manchester United ayaa booqasho ugu tageysa Kooxda Leicester City kulan ka tirsan FA Cup-ka oo ka dhicidoona Garoonka King Power Stadium.
Leicester City:- Brendan Rodgers ayaa waxaa ka maqnaan doona seddex ka mid ah ragga ugu muhiimsan kooxda Harvey Barnes, James Maddison iyo James Justin kulanka ay wajahayaan Manchester United. Wes Morgan isagana dhaawac ayuu ku maqan yahay sidoo kale. Dennis Praet ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto kooxda ka dib markii uu labo bilood garoomada kaga maqnaa dhaawac muruqa ah.
Dhaawacyada: Harvey Barnes, James Maddison, James Justin, Wes Morgan
Shaki: Dennis Praet
Manchester United ayaa heshay xidig muhiim ah bartamihii asbuuca iyadoo Paul Pogba iyo Donny van de Beek ay ku soo laabteen garoomada. Xiddiga reer France ayaa u muuqday mid weyn kulankii AC Milan kadib markii uu soo galay qaybtii dambe isaga oo dhaliyay goolka guusha. Waxaa laga yaabaa inuusan taam u aheyn inuu ciyaaro 90kii oo dhan weli laakiin waxaa la filayaa inuu ku soo bilowdo.
Edinson Cavani ayay ahayd inuu ka baxo safka kooxda madaama uu la kulmay falcelin tababarka ka dib markii markii hore loo calaamadeeyay inuu ku soo laabanayo lugta labaad ee AC Milan. Isaga iyo Anthony Martial shaki ayaa ku jira ka hor kulanka ay la leeyihiin Leicester City. Juan Mata iyo Phil Jones ayaa weli dhaawac ah.
Marcus Rashford ayaa ‘murugo’ ka dareemay dhaawac waxaana qasab noqotay in la qaado qeybtii hore ee kulankii AC Milan. Solskjaer ayaa ku rajo weyn in ayna ahayn arin khatar ah laakiin uu shaki ku jiro kulanka Axada.
Shaki: Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Eric Bailly
Manchester United ayaa gabi ahaanba gacanta ku haysay 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee dhex maray labada kooxood. Xaqiiqdii, lagama badinin 13-kii kulan ee ugu dambeeyay ee labada dhinac dhexmara.
Waxa ay badiyeen sideed ka mid ah 10kii kulan ee ugu danbeysay ee ay ka horyimaadeen Dawacooyinka, laba kulanna waxa ay ku soo dhamaadeen barbaro.
Markii ugu dambeysay ee ay labadan koox kulmaan waxay ahayd Premier League bishii Diseembar markaas oo ay ku kala baxeen barbaro 2-2 ah.